पूर्वमाओवादीहरु एक हुनुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा बाबुरामको जबाफः ‘भावनात्मक कुरा मात्रै’ « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति : 1 October, 2021 8:54 pm
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पूर्वमाओवादीहरु एकै ठाउँमा आउने कुरा ‘भावनात्मक कुरामात्रै’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार प्रगतिवादी कवि दिलिपकुमार श्रेष्ठको ‘सपनाको पाण्डुलिपी’ गीति संग्रह विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले विभिन्न समयमा विभाजित भएका माओवादीहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने (एकीकृत हुनुपर्ने) प्रस्ताव गरेका थिए । आत्म समीक्षासहित पूर्वमाओवादीहरु एकजुट हुनुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो ।
तर, पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा आउनेभन्दा पनि नयाँ विचार र संगठनको आवश्यकता रहेको नेता भट्टराईले उल्लेख गरे । “भावनाको हदसम्म साथीहरुले भनेको कुरा सही छ । तर, त्यो भावनाले ज्ञान र विज्ञानमा पनि त परिणत गर्नुपर्यो । विवेकसँग ज्ञानमा पनि बदल्नुपर्यो । त्यो भनेको नयाँ विचार हो । नयाँ विचार सँगसँगै पार्टीको पनि नयाँ संगठन, नयाँ ढाँचा हो । त्यसैले त्यसमा पहिले बहस छलफल गरौँ । अनि त्यसको आधारमा हामी मात्रै भएर पनि त पुग्दैन । नयाँ जनसंख्या आयो, तिनलाई समेट्नुपरेन ? हामीले हिजोका मात्रै गला मिलाएर बस्छौँ भनेर हुन्छ ? सही विचार, नीति, कार्यक्रम र योजनाको आधारमा फेरि नयाँ ढंगले हामी अगाडि बढौँ,” उनले भने,“सबै पूर्वमाओवादी एकै ठाउँमा आऊ भन्ने होइन, सबै पूर्वमाओवादीहरु नयाँ ठाउँमा जाऔँ भन्नुपर्यो क्या । नयाँ ठाउँमा गएपछि त्यसको चाहिँ यो देशको मात्रै होइन, विश्व मानव जातिकै निम्ति योगदान गर्न सक्छ ।”
भट्टराईले केपी ओलीले गरेको प्रतिगमन परास्त भए पनि प्रतिगमनको नयाँ संस्करण आउनसक्ने पनि बताए । “अर्लि इलेक्सन’को नाममा पुनः कांग्रेस र एमालेलाई अगाडि ल्याउने र माओवादीलगायत मधेस, जनजाति आन्दोलनबाट आएको उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रयत्न भइरहेको भट्टराईले बताए ।